Militariga Somaliya oo sheegay in 14 Shabaab ah lagu dilay hawlgalada Gobolka Shabellaha Hoose (SAWIRRO).. - iftineducation.com
iftineducation.com – Taliska Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa faah faahin ka bixiyay hawlgalo xiriir ahaa oo maalmihii la soo dhaafay ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo kii ugu dambeeyayna uu ahaa midkii ay ka fuliyeen deegaanka Bariire, maalintii Isniinta.
War Saxaafadeed uu soo saaray Taliska Ciidanka Xoogga, ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Danab ay hawlgalo xiriir ahaa ka fuliyeen deegaanada Toora Toorow, Sabiib, Caanoole, Awdheegle iyo Bariire.
War Saxaafadeedka, ayaa waxaa lagu sheegay in hawlgaladan lagu dilay ugu yaraan 14 ka mid ah mintidiinta Urturka Al Shabaab, iyadoo tiro maxaabiis ihi looga soo furtay, halka looga qabsaday saanad ciidan.
Taliska Ciidanka Xoogga, ayaa War Saxaafadeedka ku sheegay inay sii wadi doonaan hawlgaladan cusub, ee ka dhanka ah goobaha ay maamulaan Ururka Al Shabaab.
”Ciidanka Xoogga Dalka wuxuu sii xoojinayaa hawlgalka lagu bartilmaameedsanayo cadowga dalka Soomaaliya. Ma jirto maanta meel ay nabad iyo kalsooni ku jooggaan Al Shabaab, mar walbana waxaan ku qaadeynaa weeraro qorsheysan.” Ayaa lagu yiri War Saxaafadeed.
Waxaa kaloo lagu sheegay “Waxaan qorsheysanay in sanadkan aan ku soo afjarno baabi’inta cadowga umadda Soomaaliyeed, haddana meelo kala duwan oo dalka ah uu ka socdo hawlgalkaasi.”
gabdho ayaga is wasaayo layaabkaan daawo aaway rag la’aan maa jirto oo guursada